30 Qodobbada Salaadda ee Sannadka Cusub 2020 | MADAXWAYNAHA ADDUUNKA
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda 30 Qodobbada Salaadda Sannadka Cusub 2020
Sabuurradii 24: 7-10:
7 Irdahow, madaxyadiinnii kor u qaada, Oo albaabbada xidid, albaabbada daa'imiska ahow, kor ha laydiin qaado, Oo waxaa soo geli doona Boqorka ammaanta. 8 Bal waa ayo Boqorka ammaantu? Rabbigu waa xoog badan yahay, waana xoog badan yahay, Rabbigana xoog buu ku leeyahay dagaalka. Irdahow, madaxiinna kor u qaada, Oo albaabbada xidha, Irdahow, madaxiinna kor u qaada, Oo albaabbada daa'imiska ahow, kor ha laydiin qaado. Oo waxaa soo geli doona Boqorka ammaanta. 9 Bal waa ayo Boqorka ammaantu? Waa Rabbiga ciidammada, Isaga weeye Boqorka ammaantu. (Selaah)
Had iyo goor waa wax fiican in la bilaabo sanad cusub leh salaadda. Markii aan sannadahayaga u Ilaah u ballanqaadno, wuxuu xaqiijinayaa horumarkeenna sarreeya ee sannadka. Sannad kasta waxay uur leedahay wanaag weyn iyo xumaan badan, sidaa darteed waa inaan u duceysanaa in aabaheenna jannada naga ilaaliyo sharka oo uu wanaagga u keeno guryaheenna. Sannad walba waxaa ka buuxa go'aanno, waa inaan u barinaa Ruuxa Quduuska ah inuu naga caawiyo sidii aan u gaari lahayn go'aannada saxda ah si aan ugu guuleysan karno sannadka cusub. Sanad walba waxaa ka buuxa nooc kasta oo dad ah, waa inaan ku duceysanaa in Ruuxa Quduuska ahi uu nagu hago dadka saxda ah si aan sare ugu soo kacno. Sababahan oo dhami iyo wixii ka sii badan ayaa ah sababta aan u uruuriyay 30 qodob oo tukashada ah sannadka cusub 2020.
Qodobbada salaadda waxay kaa dhigayaan wadada guusha sidaad u duceyso. Kaliya kuwa is-hoosaysiiya ee ku filan ayaa sidoo kale waydinaya jihada Ilaahay ayaa hoggaamin doona. Waa inaad fahamtaa in Masiixi tukanaya uusan waligiis noqon doonin dhibbanaha Ibliiska iyo wakiilkiisa. Markaad sanadkaaga bilowdo salaadda, malaa'igta Rabbiga ayaa kaa hormarineysa sannadka oo waxay kugu hagaajinaysaa jid kasta oo qalloocan magaca Ciise. Waxaan u arkaa qodobbada salaadda ee sanadka cusub inuu kuu keenayo guul weyn magaca Ciise.
1. Aabe, waxaan kuugu mahadnaqayaa wanaagaaga iyo shaqooyinkaaga cajiibka ah noloshaada sanadka 2019.
2. Sayidow, dhammee wax alla wixii wanaag ah oo aniga igu saabsan sanadkaan 2020.
3. Ilaahay ha u ahaato Ilaahay noloshayda sanadkaan 2020, magaca Ciise.
4. Ilaahey ha sara kiciyo oo ha ceebeeyo awood kasta oo caqabada ku jirta Eebbe noloshayda sanadkaan 2020 magaca Ciise.
5. Dhamaan wixii niyad jabkayga ah ha noqdeen ballamo rabaani ah nolosheyda sanadkaan in lagu sameeyo magaca Ciise.
6. Dhamaan dabaysha Shaydaanka iyo duufaanta ha lagu aamusiyo noloshayda, magaca Ciise.
7. Ilaahow bilowga cusub, ku billow qayb cusub oo cajiib ah nolosheyda sanadkan, magaca Ciise.
8. Wax kasta oo iga hor joogsada ha ii burburiyo magaca Ciise.
9. Meel kasta oo allabari iga gees ah oo aniga iga geesta ah, magaca Ciise ha lagu baabi'iyo.
10. Subkidda for gooldhaafka ruuxiga ah igu soo deji, magaca Ciise.
11. Sayidow, waxaad i sugtaa meesha saxda ah waqtiga habboon
12. Ilaaha reer bilowga ah, ii fura albaabbo cusub oo barwaaqo ah, magaca Ciise.
13. Sayidow, i sii fikirrada la subkay oo igu hoggaami waddooyin cusub oo barakeysan, magaca Ciise.
14. Dhammaan cimrigayga lumay iyo dadaalkeygu ha ku soo celiyo barakooyinka badan, magaca Ciise.
15. Dhaqaalahaygu ma geli doono qulqulatooyinka gaajada ee sanadkaan, magaca Ciise.
16. Waan diidanahay ruux kasta oo xishood badan oo ku kacda magaca Ciise.
17. Sayidow, dhagaxa weyn malab iga soo bixi, Oo i daaya aan helo jidka dadku igu yidhaahdo, Jid ma ahayn.
18. Waxaan ku dhawaaqayaa waxba kama jiraan oo aan ka tirsanayaa dhammaan ereyada xun ee aan kaga hadlay noloshayda, gurigayga, shaqada, iwm, ee ku saabsan diiwaanada shaydaanka, magaca Ciise.
19. Sannadkan, kama tagi doono dhammaadka mucjisooyinkayga, magaca Ciise.
20. Qaab dhismeed kasta oo nacayb, cadaawad iyo isku dhac guri ah ha lagu curyaamiyo magaca Ciise.
21. Waxaan amar ku siinayaa xaddidaada shaydaan kasta oo caafimaadkayga iyo dhaqaalahayga in laga qaado, magaca Ciise.
22.Dhammaan waxa laga dhaxlay xaddidaadda helitaanka waxyaalaha wanaagsan, magaca Ciise.
23 Sayidow, sara joogso, oo ceebow, Oo nafsaddaada oo dhan u nafi.
24. Magaca Ciise, jilib kasta oo shaydaanka iska dhigaya ha foororsado.
25. Waxaan diidaa inaan cuno rootida murugada sanadkan, magaca Ciise.
26. Waxaan burburiyaa caqiido kasta oo ruux ahaaneed oo nolosheyda ah, magaca Ciise.
27. Dabaysha bari waa in ay curyaamisaa oo aan ku ceebaajiyaa dhammaan cibaadayda Fircoon iyo Masriyiinta, magaca Ciise.
28. Samee wax noloshayda ah kulankan ducada ah oo noloshayda u beddeli doona wanaag, magaca Ciise.
29. Sayidow, iga badbaadi xumaanta oo dhan sanadka cusub oo ah magaca Ciise.
30. Uma baryi doono lacag ama wax kale oo bishaan ku bixinayo magaca Ciise
Waad ku mahadsan tahay jawaabta salaadda.
article Previous40 Qodobbada Salaadda oo looga soo horjeedo Cadaadiska.
Next article30 Qodobbada Salaadda ee ku saabsan kuwa aamusnaanta aamusaan
joornaalada Diseembar 31, 2018 saacadu markay tahay 6:10
Augustus T. Seongbae, ll Janaayo 8, 2019 Saacaddu markay ahayd 3:11 am
Anigu waxaan ahay wadaad Seongbae oo ka socda Liberia, waxaan kuugu mahadnaqayaa ducooyinkaaga ruux ahaan loogu talagalay. Wasaaraddaydu waa ka faa'iideyste iyaga.
Wadaadka Ikechukwu Chinedum Janaayo 8, 2019 Saacaddu markay ahayd 4:02 am
Ilaahay ha idinku barakeeyo wadaad, Ilaahay ha barakeeyo howlahaaga oo badbaadi malaayiin nafood adiga. Magaca Ciise.
Mowliid Okechukwu Janaayo 8, 2019 Saacaddu markay ahayd 6:25 am
Aad baad u mahadsantahay mudane .. Magaca Ciise, waxaan kudhagaxyaa inaad subkidaada u weyneeyso sannadkan 2019 .. Iyadoo la tixraacayo tukashadan, albaabbada dhow ee hodanka, weynaantiisa, furfurnaanteyda ayaa ii furi doona inaan ku noolaado.
Wadaadka Ikechukwu Chinedum Janaayo 8, 2019 Saacaddu markay ahayd 8:17 am
Rabbi ha ku sharfiyo, Sayidow, Magaca Ciise.
Ben olie Janaayo 15, 2019 saacadu markay tahay 6:51 pm
Waad ku mahadsan tahay dhamaan ducadaada awooda badan Waxaan ahay nin weyn oday Ben olie oo reer Nigeria ah
Wadaadka Ikechukwu Chinedum Janaayo 15, 2019 saacadu markay tahay 8:59 pm
Sayidku ha ku sharfo Sir.
Wadaad kuta w Boulner Janaayo 17, 2019 saacadu markay tahay 11:21 pm
Kii subkay Eebbe waan ku barakeeyay hubkan ruuxiga ah, waxaan ahay wadaad dumar ah oo ka socda Liberia oo aad u doonaya inaan arko dhaqaaqa Ilaah noloshayda wasaaradeena ayaa ka faa iidaystay qodobadan baryada waana baahi badan nahay ilaahay ha kuu siyaadiyo mudane. Mahadsanid.
Wadaadka Ikechukwu Chinedum Janaayo 18, 2019 Saacaddu markay ahayd 12:06 am
Ilaahay ha barakeeyo wadaad, waxaad ku arki doontaa ficillo yaab leh wasaaradaada sanadka cusub.
Wadaad P Diseembar 25, 2019 saacadu markay tahay 4:16
Ku subkay Eebbe ee ku sugan Swaziland iyo wadaadka, Ilaahay ha kuu barakeeyo nin aad u badan oo Ilaah ah runtii waxaad hub u siisaa wax badan oo sheydaanka iska caabiya.
Idiongo Akpanukoh Janaayo 6, 2020 Saacaddu markay ahayd 6:28 am
Faallo: Waad ku mahadsan tahay wadaadkayga aan jeclahay ee bixinaya qodobbada salaadda ee aan ka helay waxtar aad u badan iyo ilaha nolosheyda ee barakeysan Sayidkeenna wanaagsan ha sii wado inuu sifiican kuugu adeegsado shaqadiisa Boqortooyada, Aamiin.
Seun Janaayo 10, 2020 saacadu markay tahay 7:39 pm
Lukonga Febraayo 26, 2020 Saacadu markay tahay 9:48 pm
Waad ku mahadsantahay qodobbada salaadda, Ilaaha Qaadirka ah ha kugu barakeeyo howshaada Ciise Masiix.
alfred christana Maarso 7, 2020 saacadu markay tahay 11:01 pm
Nin yahow waad ku mahadsantahay sir ha ku barakeeyo Rabbi ha ku barakeeyo sifiican
Fish Febraayo 16, 2021 Markay tahay 8:59 am
5 Qodob Oo Salaada Ah Oo Loogu Duceeyo Nigeria
15 salaadood oo salaadiinta lagu dallaco shaqada
30 Qodobbada Salaadda wax ku oolka ah ee Horumarinta
20 Qodobbada Salaadda Caddaaladda ee Loogu Talagalay Meelaha allabariga Qoyska